Akụkọ - Nkera nke mbụ nke ọzụzụ ọzụzụ ahụike Sanxin
Ọkara nke mbụ nke ọzụzụ ọzụzụ ahụike Sanxin
N'ime afọ "ọrịa" pụrụ iche, anyị buru ụzọ kpọta "Xinhuo" site na igwe ojii ma bịarute na ezinụlọ Sanxin na June 28. Talent bụ ntọala nke ụlọ ọrụ ahụ. General Secretary Xi ekwusiwo ike ugboro ugboro na talent bụ usoro ihe eji eme ka a gbanwee mba ma merie ụzọ na asọmpi mba. Maka Sanxin, talent ndị kwesịrị ekwesị maka Sanxin bụ isi iyi nke iwuli ntọala narị afọ gara aga na ntọala maka ụlọ ọrụ ka ọ bụrụ nke a na-apụghị imeri emeri.
Igodo nke ndu kwesiri igu ya site na mbido. Ọ bụrụ na bọtịnụ mbụ ezighi ezi, ihe ndị ọzọ ga-ezighi ezi. Maka usoro nke isii nke atụmatụ “Xinhuo” nke Sanxin, ụlọ ọrụ a arụpụtala atụmatụ ọzụzụ zuru ezu, bụ nke ejirila amamihe rụọ ọrụ site na ụbọchị ọrụ mbụ. Site na ọzụzụ a na-ahụ anya na imekọ ihe ọnụ, site na mgbanwe ọrụ na atụmatụ ọrụ, site na ọdịbendị ụlọ ọrụ na njikwa na njikwa, site na akụkọ Sanxin ruo Sanxin n'ọdịnihu, site na ndị isi ụlọ ọrụ na ndị ahịa azụmaahịa, ndị nkuzi anyị niile maara ihe niile, na "Xinhuo" anyị bụ raara onwe ya nye ma adighi ike.
Dị ka okwu ochie si kwuo, "a mụrụ nna, onye nkụzi na-akụzi." “Onye nkuzi” abụghị nanị inye ihe ọmụma na nkà, kamakwa ịgbakwunye mmetụta sitere n’obi nke nchegbu na izi ihe nke ndị mụrụ ụmụ. Na nkera nke mbụ, anyị mere nnukwu emume nke ofufe ndị nkuzi, nke abụghị naanị emume, kamakwa ọ bụ ihe dị mkpa na ọrụ ọdịnihu Guan Peisheng. Dị ka okwu a na-ekwu, "ịge ntị n'okwu gị ka mma karịa ịgụ akwụkwọ maka afọ iri". Onye nduzi ga-eduzi anyị ka anyị mepee ebe ọrụ.
Enterprise N'ezie ọzụzụ
▲ lecturefọdụ ndị nkuzi
Naanị na ọ bụ naanị n'akwụkwọ ka ị ga-achọpụta na ọ dị omimi na njedebe nke ụbọchị, ị ga-eme ya. " Sanxin arụsiwo ọrụ ike na mmejuputa iwu nke nnukwu ụsụụ ndị agha nke ihe ọmụma, ndị nwere nkà na ndị na-agbanwe agbanwe, na-ebute mmụọ nke ndị ọrụ na onye omenkà, ma mepụta ụdị mmekọrịta nke ọrụ dị ebube na ọnọdụ ọkachamara nke ịgbalị izu okè. . Ihe anyị mutara ekwesịghị ịnọ n’akwụkwọ ma ọ bụ n’isi anyị, kama e kwesịrị itinye ya n’omume ma werekwa ihe okike kpọrọ ihe. Anyị kwesịrị inweta ịdị n'otu nke ihe ọmụma na omume, mụta ezi ihe ọmụma ma ghọta ezi ihe ọ pụtara na omume, kwalite ọrụ site na ihe ọmụma ma chọọ ihe ọmụma site na ịme.
“Ọ bụ ezie na ụzọ ahụ dị nso, anyị enweghị ike ime ya; ọ bụrụgodị na okwu ahụ dị obere, ọ gaghị ekwe omume. ” Enterlọ ọrụ ọ bụla, ma ọ bụ nnukwu ma ọ bụ obere, na-eme ya na ntọala ala ma jiri nwayọ nwayọ. Anyị kwesịrị ịdị na-agbasi mbọ ike ma na-adị uchu, na-arụsi ọrụ ike ma na-agbasi mbọ ike. Xinhuo na-ebido ọkụ ọkụ, nke a na-apụghị igbochi egbochi. Ndị Sanxin kwesịrị ikwusi ike n'echiche ha na nkwenkwe ha, nwee ebumnobi dị elu, na-agbada n'ụwa, ma bụrụ ndị na-agbanwe agbanwe nke oge a. Na omume doro anya nke imezu afọ Sanxin nke Narị Afọ, ha kwesịrị ịhapụ nrọ ndị ntorobịa ha, ma gbalịsie ike ide edemede dị iche iche nke ndụ na mmepe nke ahụike ndị mmadụ!